कानूनी क्षेत्र प्यारो लागेकी नानीको अभिनय यात्रा-NepalKanoon.com
काठमाडौं: बिगत लामो समयदेखी नाट्य क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेकी नानी थापा यतिबेला कलाकारिताको अर्को खुडकिला पार गर्न सफल भएकी छिन ।
सिन्धुपाल्चोकमा हुर्किएकी नानीको सानै देखी कलाकारितामा रुचि र लगाव थियो । नानीलाई हाल सम्म कयौ नाटकमा अभिनय गरिसकेकी छिन । यसै परिप्रेक्षमा अभिनय, लेखन र निर्देशन विद्याको अर्को सफलता नानीको आफ्नै अभिनय र निर्देशन रहेको आधुनिक गित म बाँचेकोको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नानीको अभिनय देखि लिएर निर्देशन पक्षले पनि उनलाई थप सफलता दिलाएको छ ।
चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वर रहेको यस गीतमा एकनारायण भण्डारीको शब्द सृजना रहेको छ । यस गीतमा संगीत भने आशिष अविरलको रहेको छ । करिव दुई दशक अघिदेखी फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफीमा चर्चित रहेका सहकर्मी साथी कमल कोइरालाको छायांकन रहेको उक्त म्युजिक भिडियोले राम्रो बजार स्गथापित गर्दै गएको छ । लोटस इन्टरटेन्टमेन्टले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोमा नानी थापाको अलवा अविन, प्रकाश र नितान्तको अभिनय रहेको छ ।
नानीले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनी शिक्षा पनि हाँसील गरिसकेकी छिन निकट भविष्यमा कानून व्यवसायीको रुपमा कानूनी क्षेत्रमा स्थापित हुदै गित, संगित, नाटक, म्युजिक भिडियो र निर्देशनलाई सँगै अगाल्दै जाने उनले बताईन ।
“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...
सम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका मान्यजन सँग...
काठमाण्डौ: शितल पाण्डे कानून ब्यवसाय सगै सांगितिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी युवा कानून ब्यवसायी हुन । उनी पेशामा कानून व्यवसायी भए पनि सांगितिक क्षेत्रमा पनि शशक्त ढंगले उदाएकी आधुनिक गित र गजल गायिका हुन ।...
मेरी छोरी कविता मेरी छोरी आजको दिन हर्षको दिन तिम्रो नयाँ घर अनि संसार बन्ने दिन यो खुसीयालीको दिन आज खुसीको आँशु गहभरी छछल्किएको छ हिक्काहरु मुटु भरी अडकिएको छ शुभकामना मेरी छोरी तिमिलाई बैबाहिक बन्धनको तिमि भन्न सक्दिनौ केही पनि बोल्न सक्दिनौ तिमि भित्रको पिडा मैले...
ह्याप्पी डिभोर्स कथा निकै लामो समय पछी मृजनसंग मेरो भेट बाटोमा अचानक हुन्छ। भेटेर हामी खुशी भयौ। म उसैको घर गए। घर चकमन्न, कोही थिएन। मैले सोधे मृजन भाउजु खै ? उसले के भनु ? लामो कथा...
काठमाण्डौ: शितल पाण्डे कानून ब्यवसायी सँगै सांगितिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी युवा कानून ब्यवसायी हुन । उनी अदालतदेखि कानूनका धारा उपधाराको संयोजन मिलाउदै वहस मात्र गर्ने होइन संचारमाध्यममा विभिन्न प्रकारका गित संगीतको माध्ययमबाट शुरीलो भाकाले...
प्रकाश समीर- काठमाडौ: भनिन्छ, कला, साहित्य र संगीतको कुनै जात, धर्म, वर्ण हुदैन । कला सबैमा हुन्छ । कसैसंग हाल्ने कला होला, कसैसंग नाँच्ने, केही संग गाउने, केही संग लेख्ने । प्रकृतिले हरेकलाई कलाकार...
राधा आजबाट देशभर प्रदर्शनमा
नायक जीवन लुइँटेल तथा नायिका सञ्चिता लुइँटेलबीचको ‘केमेस्ट्री’ हेर्न पाइने चलचित्र हो– राधा । चलचित्र ‘राधा’ आज शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएके छ । बसयात्राका क्रममा चिनाजानीपछिको ख्याल ठट्टाले मायाको रूप लिएपछिको सम्बन्धलाई साकार बनाउने सपना...
शितलको शव्द, स्वर, र संगितको छटपटाई रहेँको म्युजिक भिडियो बजारमा
कानून व्यवसायमा समेत सकृय रहँदै आएकी शितल पाण्डेको छटपटाई छटपटाई रहेँ को म्युजिक भिडियो दर्शक माझ ल्याएकी छन । शितल कानून ब्यवसायको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी युवा कानून ब्यवसायी हुन । उनी अदालतमा मुद्दाको पुरपक्षसँगै...
चर्चाको शिखरमा छक्कापन्जा, पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि हलमा
गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शनीमा आएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ले नेपाली सिने इतिहासमा विभिन्न रेकर्ड बनाउन सफल भएको छ । हास्यव्यंग्य जानरामा बनेको यो फिल्मको निर्देशन दीपाश्री निरौलाले गरेकी हुन् । कलाकार दीपकराज गिरीलगायतले निर्माण गरेको यो...